Aliexpress E ကိုလမ်းညွှန်, မှတ်ပုံတင်, ဝယ်ယူ, ယူရိုစျေးနှုန်းတာဝန်အငြင်းပွားမှု
အစ » ဘ‌‌လော့ခ် » သင်ခန်းစာများ » Aliexpress E ကိုလမ်းပြ။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း, စျေးဝယ်, ဘာသာစကား Lithuanian, ယူရိုအတွက်စျေးနှုန်းများကိုအကူအညီတာဝန်များကိုအငြင်းပွားမှုများ။
Aliexpress အာနီယံ။ ဘယ်လိုလုပ်နိုင် Aliexpress site ကိုဘာသာစကား Lithuanian သို့ဘာသာပြန်ထားသော?
အလည်အပတ် Aliexpress က်ဘ်ဆိုက်.
က "ဘာသာစကား" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ (Lith ။ Language)
"ကို Select လုပ်ပါဘာသာစကား" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ (Lith ။ ဘာသာစကားများကိုရွေးချယ်ပါ)
အဆိုပါဘာသာစကား Lithuanian ရွေးချယ်ပါ။
အဆိုပါ site ကို၎င်းသင်သည်ဘာသာစကား Lithuanian သို့ဘာသာပြန်ထားသောလိမ့်မည်. သငျသညျဘာသာပြန်ချက် disable လုပ်ဖို့လိုလျှင် "Show မူရင်း" ကိုနှိပ်ပါ (Lith ။ မူရင်းပြရန်) ။
ဒီနည်းလမ်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက် - သင်ကဘာသာစကား Lithuanian ၏အမည်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ရှာဖွေရေး box ထဲမှာကုန်ပစ္စည်းများရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်, ထိုအမှတ်တံဆိပ်အမည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ သို့သျောလညျးကိုသင်ဘယ်ဖက်အခြမ်းထဲမှာဖိုလ်ဒါအတွင်းပစ္စည်းများကိုရှာဖွေနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Aliexpress အာနီယံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်လျှင်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
Aliexpress E ကိုလမ်းပြ။ ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ရန် AliExpress ပထမဦးဆုံးမိန့်သိုလှောင်နှင့် execute?
လက်ဆောင် မည်သည့်အမှာစာကိုမဆို ၀ ယ်ယူသူဖောက်သည်အသစ်များ ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်လက်ဆောင်ကို ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာရွေးချယ်နိုင်သည်။
သွား Aliexpress.com သို့မဟုတ် com ။Aliexpress.com "ကို Join အခမဲ့ on" site ကိုကလစ်
e-mail, ရိုက်ထည့်ပါ။ မေးလ်လိပ်စာ, နာမည်, စကားဝှက်ထပ်စကားဝှက်များနှင့်လုံခြုံရေးကုဒ်ရိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါရန်သဘောတူရန်အကွက်ကို Check Aliexpress အသုံးပြုသူစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ။ က "သင့်အကောင့်ကို Create" ကိုနှိပ်ပါ
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာသို့သွားပါ။ မေးလ်။ သငျသညျအတည်ပြုချက်စာတစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါစာနယ်ဇင်း "ငါ့အီးမေးလ်ကိုအတည်ပြုပါ"
အဘို့အရှာဖွေရေးတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး menu ကိုကို item / ပစ္စည်းများကို select
စျေးနှုန်းများ setting အထိ
အခမဲ့ရေကြောင်း - အခမဲ့ရေကြောင်း
(ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီး) ကုန်ပစ္စည်း rating 4-5 ကြယ်များ
ကုန်စည်အမိန့် (ပိုမိုနှစ်သက် / အရှိဆုံးအမိန့် / ရောင်းချသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက် / စျေး)
ဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်အရအဘယ်သူမျှမ rating / အလို့ငှာရေးဆွဲ။
ဆိုင်အမည် / အများကြီးအချိန် / စုစုပေါင်း rating / ရာထူးအပြုသဘောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အရောင်းဆိုင် / ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ရောင်းချ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် / Shipping - ပေးပို့ခြင်း / ပမာဏ
နှင့်တုံ့ပြန်ချက်3ပေါ်တွင်သင်မှတ်ချက်များနှင့်အတူသာရုပ်ပုံများကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ကိုနှိပ်
တစ်ဦးလွှဲပြောင်းနည်းလမ်းနှင့်ထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ခြင်းသည့်အခါသတ်မှတ်ချက်များ "လှည်းပေါင်းထည့်ရန်" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ
သည် "ကြည့်ရန်စျေးဝယ်လှည်း 'ကိုနှိပ်ခြင်းသင်ခြင်းတောင်းပြောင်းရွှေ့နှငျ့" Continue စျေးဝယ် "ကိုနှိပ်စျေးဝယ်ဆက်လက်နိုင်ပါလိမ့်မည်ပါလိမ့်မယ်။
delivery method ကို
"အခမဲ့သင်္ဘော" - အခမဲ့ရေကြောင်းသို့မဟုတ်ရေကြောင်းစွဲချက် / အနီးစပ်ဆုံးပေးပို့အချိန်
"အားလုံး Buy 'ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ဝယ်ယူအတည်ပြုခဲ့သည်ပါလိမ့်မည်
သငျသညျစျေးဝယ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်သင်သည်သင်၏ data ကိုရိုက်ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ပေးပို့ရန်လိပ်စာသင့်အကောင့်ပေါ်တွင်သင်၏မူလတန်းလိပ်စာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် "ကို default အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ" ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် Save နှင့်ဤလိပ်စာမှတင်ပို့မည် "ကိုနှိပ်ပါ (save နှင့်ဤလိပ်စာမှကုန်ပစ္စည်းပို့ပေးရန်)
ထိပ်မှာသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ "Edit ကို 'ကိုနှိပ်ခြင်းသူတို့ကိုသင်တည်းဖြတ်နိုင်သည်။ လွတ် box ထဲမှာ, သင်ရောင်းချသူထုတ်ကုန် (အင်္ဂလိပ် / ရုရှ) အကြောင်းကိုမဆိုတောင်းဆိုမှုကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
ကဒ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလ / နှစ်က (ဥပမာ။ 07 / 18)
(များသောအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကဒ်၏နောက်ကျောမှာတွေ့ရှိ)3ဇာတ်ကောင်လုံခြုံရေးကုဒ်
4 ပြီးနောက် "Confirm" ကိုနှိပ်ပါနှင့်သင့်အမိန့်ကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်။ သငျသညျမှအမိန့်ကိုအတည်ပြုတဲ့ e-mail, လက်ခံရရှိပြီးနောက်။ မေးလ်နှင့်ရက်အနည်းငယ်ထုတ်ကုန်တင်ပို့အခါနောက်ပိုင်းတွင်, သင်တို့ကုန်ပစ္စည်းကိုလက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်အတည်ပြုချက်အီးမေးလ်ကိုစလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်။
Aliexpress အငြင်းပွားမှု (Lith ။ ြငင်းခုံ) က၎င်း၏ပေးပို့၏ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်ဖောက်ဖျက်၏ရလဒ်အဖြစ်။
သငျသညျ, ထိုကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိပျက်စီးသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာခဲ့ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်သင်ရောင်းချသူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်အရာ, အငြင်းပွားမှုစတင်နိုင်ပါသည်, ထိုကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအကြားထ Aliexpress ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု။ ဒါကြောင့်ကိုစတင်ဘို့ကအမှုဖြစ်လျှင်, လိုအပ်ကြောင်း, ကုန်ပစ္စည်းများမိန့်နောက်မ 60 ရက်ပေါင်းထက်အဲဒီလို (တင်ပို့ခြင်း)။ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံချက်များအပေါ်ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အအာမခံချက်၏နံပါတ် (ရှိပါတယ် ဒီမှာ).
ဒုတိယထုတ်ကုန် 60 ရက်ပေါင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပြန်အမ်းငွေအဘို့သင့်တောင်းဆိုမှုကိုအတွင်းကိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
"ကြှနျုပျ၏အမိန့်" ကိုနှိပ်ပါ (Lith ။ အကြှနျုပျ၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု)
ဤကိစ္စတွင်အတွက် 34 ရက်ပေါင်း (ဒီအချိန်၏အဆုံးပြီးနောက်ပြဿနာဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသောသူလည်းမိမိမျက်နှာသာအတွက်ဖြေရှင်းမရ) ။
အခုဆိုရင် ( "ပွင့်လင်းအငြင်းပွားမှုကိုကလစ်နှိပ်ပါLith ။ post ကိုအငြင်းပွားမှု)
(။ Lith "ငွေကိုပြန်သွား") သာလျှင်ပြန်အမ်း - ရောင်းသူသဘောတူလျက်, ထုတ်ကုန်ငွေသင်တို့ရှိသမျှသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှပြန်လာသောပါလိမ့်မည်ဆိုပါက။
သို့ပြန်သွားသည်ကုန်စည် (Lith "ကုန်ပစ္စည်းများသို့ပြန်သွားသည်" ။ ) - သင်ကကုန်ပစ္စည်းများပြန်လာနှင့်ရောင်းချသူငွေကိုပြန်အမ်းမည်ဖြစ်သည်။ (အလွန်ရှားပါးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းနည်းလမ်း)
သငျသညျဟုတ်ပါတယ်, တစ်ဦးကို item ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါ - ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမ - ဟုတ်ကဲ့။
သင်သည်သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုပိုက်ဆံတစ်ဦးမျှတသောငွေပမာဏကိုပြန်ပေးမှလမ်း (သင်အပြည့်အဝငွေပမာဏကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်) "သာပြန်အမ်းငွေ" ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
သက်သေအထောက်အထားများ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများ upload ရန်သေချာစေပါ။
Send - "Submit" ကိုနှိပ်ပါ။
အခုတော့ရောင်းချသူပြန်ကြားချက်အဘို့အစောင့်ပါ။ အငြင်းပွားမှုနှင့် ပတ်သက်. အပ်ဒိတ်များတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်ကိုအီးမေးလ် get သငျ့သညျ။
သင်သည်သင်၏ပြန်အမ်းငွေနှင့် PNS ပမာဏကိုလျှော့ချဖို့,: အဆိုပါရောင်းချသူအခြားဖြေရှင်းနည်း (သူတို့ခံယူသို့မဟုတ်ပျက်စီးကြဘူးလျှင်ကုန်ပစ္စည်းများပြန်ပို့ပါ, ကျိုးပဲ့။ ဥပမာ) ကိုကမ်းလှမ်းစည်းကမ်းချက်များဖို့သဘောတူလိမ့်မည်။ သငျသညျသဘောတူသို့မဟုတ်သဘောမတူနိုင်ပါ။ သငျသညျသဘောမတူလျှင်, သင်အခြေအနေများ re-adjust နိုင်ပါတယ်။
သို့သော်နှစ်ဖက်သဘောတူကြဘူးလျှင်, သို့မဟုတ်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာ (မအကြာတွင် 15d ။ ) ရောင်းသူရှာဖွေတွေ့ရှိ, သင်သည် "စက်လှေကားအငြင်းပွားမှု" ကိုနှိပ်ပါနှင့်အငြင်းပွားမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်တဲ့စာမျက်နှာအငြင်းပွား Aliexpressဒါကသူတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုဖြေရှင်းကူညီပေးပါမည်။ အငြင်းပွားမှုညှိပါလိမ့်မယ် "Modify" ။ အငြင်းပွားမှုအငြင်းပွားမှု cancel လိမ့်မယ် Cancel "," Cancel "။
Aliexpress အပိုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားကိုတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ အများအားဖြင့် Aliexpress ဝယ်သောသူထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကြာပေမယ့်အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပါသည်။ Aliexpress ဆုံးဖြတ်ချက်သင်ဆုံးဖြတ်ချက် Aliekpress နှင့်အတူသဘောမတူဘူးလျှင်, သင်ကတိုင်ကြားစာရေးသားနိုငျ (နောက်ဆုံးနှင့်တာတော့သေချာတယ်ဖြစ်ပါသည် Aliexpress'' ဘဏ်မှတစ်ဆင့် UI, ဒါပေမယ့်ဒီလုံးဝသီးခြားဆောင်ပုဒ်နှင့်အမှုကိစ္စ၏ကျယ်ပြန့်အများစုဖြစ်ပါသည် - အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစွန့်ပစ်) ။
Aliexpress လစ်သူ။ Delivery ဒေသဆိုင်ရာအပြင်အဆင်များ, ယူရိုငွေစျေးနှုန်း။
ခလုတ်က "ရန်သင်္ဘော on" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
Set ငွေကြေး (ဥပမာ: EUR - ယူရို။ )
"Save" ကို (ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်) button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ယခု မှစ. စျေးနှုန်းယူရိုမှာပြပါလိမ့်မည်, သင်အတိအကျရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်မြင်ရပါလိမ့်မည်ကောင်တာမှသင်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်ကိုရွေးပါ။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း Aliexpress ယူရိုအတွက်စျေးနှုန်းများ?
Cashback - ကုန်ပစ္စည်းများစျေးနှုန်းချိုသာ
ထုတ်ကုန်များအတွက်ပေးဆောင်ပမာဏ၏ပြန်ဖြစ်။ ဖတ် ဒီနေရာမှာနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်.
Aliexpress ru လမ်းညွှန်။ Aliexpress ရုရှား။
Aliexpress - စလီ, Aliekspress, Aлиэкспрессလီ Express ကို, အလီ Express ကို, အဖြစ်လူသိများ Aliexpress လစ်သူ ...
အသုံးပြုသူ Rating: 4.71 (7 ratings)
Tags:aleexpresကျောက်စိမ်းလက်ဆောင်အလီသို့မဟုတ်ဖော်ပြပါAli ExpressAli ExpressaliaexpresaliasexpressဆီAliekspressaliexpressAliexpress cashbackaliexpress အငြင်းပွားမှုAliexpress ြငင်းခုံAliexpress ယူရိုအတွက်aliexpress လစ်သူaliexpress Lithuanian ထဲတွင်aliexpress Lithuanian ထဲတွင်aliexpress ltAliexpress မှတ်ပုံတင်aliexpress ruAliexpress ရုရှားလိုအားလုံးအမြန်alxpresaly expressaly xpressalyexpresမင်္ဂလာပါcahbackascashbackအချက်အလက်တရုတ်ကနေကုန်ပစ္စည်းများru aliexpressAliekspress
ကုန်စည်များ၏စာရင်းကြိုက်တယ်ဖို့ Addedကြိုက်တယ်ပစ္စည်းစာရင်းထဲကဖယ်ထုတ်လိုက် 1
Juras 2019:6 pm မှာမတ်လ 14, 19
ယောန 2019:19 pm မှာစက်တင်ဘာလ 8, 46
အဘယ်ကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းများတွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သနည်း၊ အခြားဘာသာစကားများတွင်အဘယ်အရာပိုဆိုးသနည်း။ နည်းပညာဝေါဟာရတွေကိုဘယ်မှာရှာရမလဲတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီမဟုတ်ပါ။
အင်ဖို @tenpigiau.lt 2019:22 pm မှာစက်တင်ဘာလ 23, 11
ရိုးရိုးလေးပါ Aliexpress ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကုန်သွယ်တရုတ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဆိုဒ်အားဘာသာစကားအားလုံးကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည် Aliexpress 100mln ထုတ်ကုန်များထက်ပိုမိုသောအရင်းအမြစ်အမျိုးမျိုးကိုစျေးကွက်တင်ရောင်းချသည်။ လစ်သူယေးနီးယားသည်အလွန်သေးငယ်သောစျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝယ်လက်ထားရှိရန် Aliexpress အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘာသာစကားဗားရှင်း (အင်္ဂလိပ်၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ စပိန်…) ရှိသည်။ ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ မင်းတို့ကသူတို့အတွက်မပေးရင်၊ သင်ဟာဂူဂဲလ်ဘာသာပြန်ကိုသုံးပြီးဒီစာမျက်နှာကိုလစ်သူရူးဘာသာသို့ပြန်ဆိုနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒီ site ဟာအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအင်္ဂလိပ်လိုရှာရန်လိုလိမ့်မယ်။
အသုံးအနှုန်းအများစုသည်အတော်လေးကောင်းစွာဘာသာပြန်ဆိုကြသည် https://translate.google.com/ ဒါပေမယ့်မင်းစမ်းကြည့်လို့ရတယ် http://vertimas.vdu.lt
အမည်မသိ 2019:23 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 20, 36
အီးမေးလ်များကိုဖလှယ်နည်း | aliexpress
အင်ဖို @tenpigiau.lt 2019:10 pm အချိန်ဒီဇင်ဘာလ 14, 35
တဦးတည်း Ninebot Z6 လျှပ်စစ် Single-လှုံ့ဆျော (35km / ဇ, 50km ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)